चर्चित खबर – Page4– .:: Welcome to Saurahaonline.com
वाम गठबन्धनमा खटपट, गठबन्धन छाड्ने बाबुरामको चेतावनी २७ आश्विन २०७४, शुक्रबार ०८:११
काठमाडौं, २७ असोज । अहिले चुनावी तालमेल र निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकताकै ‘महाअभियानु घोषणा गरेको वाम गठबन्धनभित्र एक साताभित्रै खटपट सुरु भएको छ । चुनावी तालमेलमा निर्वाचन क्षेत्र भागबन्डाको विवादका कारण नयाँ शक्तिले गठबन्धन छोड्ने चेतावनी..
वाम तालमेलबारे यसो भन्छ, भारत
काठमाडौँ, २७ असोज । भारतले नेपालका वामपन्थी शक्तिबीच भएको चुनावी तालमेल र नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने घोषणा नेपालको आन्तरिक मामिला भएको जनाएको छ । एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिबीच चुनावी तालमेल भएको सम्बन्धमा भारतीय पत्रकारले..
यसकारण प्रकाश दाहाल एक कुशल व्यवस्थापक २६ आश्विन २०७४, बिहीबार २२:०५
बलिदान शर्मा असोज २६ , आधुनिक समाज र व्यस्त जनजीवनमा एक मिनेटको महत्व निकै गुरुत्वको हुन्छ । व्यस्त सामाजिक जीवनमा समयको व्यवस्थापन सैद्धान्तिक दृष्टिले सामान्य सवाल लागे पनि व्यवहारिक जीवनका दृष्टिले निकै गुरुत्वपूर्ण छ । आज व्यक्तिगत जीवन,..
अनौठो चलन,जहाँ जेठो सन्तान छोरा जन्मिए गाउँलेलाई खसी काटेर खुवाइन्छ
बैतडी, २६ असोज । प्रदेश नं ७ अर्थात् सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला बैतडीको एउटा गाउँमा अनौठो चलन छ ।जिल्लाको तल्लोस्वराडमा पर्ने मेलौली नगरपालिका वडा नं ९ असुर गाउँमा जेठो सन्तानकारुपमा छोरा जन्माएका आमाबुवाले हरेक वर्ष तिहारको औँसीका दिन..
८० न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण थाहै पाएनौ
काठमाडौं, २६ काठमाडौँ । उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा वैधानिकताको प्रश्न उठिरहेका बेला न्यायपरिषद्कै दुई सदस्यले आफूलाई थाहा नदिई निर्णय भएको भनाइ सर्वोच्च अदालतसमक्ष राखेका छन् । न्यायाधीश नियुक्ति निर्णय..
प्रधानमन्त्री देउवाले गरे कानुन उल्लंघन ,खुमबहादुर टिकट बाँड्दै
काठमाडौं, २६ असोज । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी विधान उल्लंघन गर्दै उम्मेदवारलाई टिकट बाँड्ने अधिकारसम्पन्न संसदीय समिति बनाएका छन् । विधानत १४ सदस्यीय हुनुपर्ने समितिलाई उनले १७ सदस्यीय मात्रै..
एमालेको विरोधका कारण चिकित्सा विधेयकसंसदमा पेस हुन सकेन
काठमाडौं, २६ असोज । अनशनरत प्राध्यापक डा.गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न सरकार तयार भए पनि प्रतिपक्षी एमालेको विरोधका कारण बुधबारको संसद् बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेस हुन सकेन। विधेयकमा माथेमा प्रतिवेदन र डा.केसीको सुझाव समेट्न..
को हुन् गौचनका हत्यारा ? २५ आश्विन २०७४, बुधबार ०७:४९
काठमाडोँ, २५ असोज । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हतयाको एक दिन वितिसक्दा पनि प्रहरीले अपराधीबारे कुने सुँईको पाउन सकेको छैन । सोमबार दिउँसो घरबाट गाडी चढेर निस्केको गौचनको अज्ञात समहुले गोली हानी हत्या गरेको थियो..
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सार्ने कसरत
काठमाडौँ, २५ असोज । राजनीतिक ध्रुविकरण बढ्दै गएपछि आगामा मंसिर १० र २१ गतेका तय गरिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सर्न सक्ने चर्चा जोडतोडले चलेको छ । सरकार र राजनीतिक दलका नेताको अभिब्यक्ति सुन्दा यो चर्चा निराधार भनेर बेवास्ता गर्न..
फेरी अर्का व्यवसायीको गोली हानी हत्या
काठमाडौं, २५ असोज। सर्लाही कविलासी नपा वडा ३ बस्ने २७ वर्षीया सुनील शाहलाई गोली हानी हत्‍या गरेको छ । सर्लाहीको पीडारीमा सुनचाँदी पुसल बन्द गरेर घर आउने क्रममा तीन जनाको अज्ञात समूले गोली हानी हत्‍या गरेको हो । शाहले हरिपुर नपाको पीडारी बजारमा..
काठमाडौं ,८ फागुन । सरकारले कृषिजन्य..
हेटौँडा, ८ फागुन । उमेर २१ वर्ष । विवाह..
काठमाडौं,८ फागुन । नजिकका राष्ट्रिय..
लहान, ८ फागुन । दलित बालकले कथित..
२० जनालाई ह्वीलचियर बितरण
शलिकराम भट्टराई नवलपुर , ७ फागुन ।..
नेपाल सरकारले १७,२१४ जना स्थायी शिक्षक माग्यो ?
चितवन, ११ कात्तिक । नेपाल सरकार शिक्षक सेवाका लागि विभिन्न तहमा गरि १७, २१४ जना नयाँ शिक्षकहरु माग गरेको छ । हेरौँ त कहाँ कति शिक्षक माग छ । ..
अन्तत सिण्डिकेट हटाउन सफल भए गृहमन्त्री बादल, हेरौँ मन्त्री महासेठ र बादलको ६ बुदेँ निर्णय
काठमाडौँ, ४ साउन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’को नेतृत्वमा अन्तत यातायात क्षेत्रको सिन्डीकेट तोडिएकोछ । सिण्डिकेटको निर्णयबाट सरकार पछि हटेको आरोप लागिरहेको..
खानेपानी मन्त्री बीना मगरद्वारा देशैभरिका छाउगोठ तत्काल भत्काउन प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध
काठमाडौं, जेठ ३० । अछाममा छाउगोठमा बसेको बेला सर्पले टोकेर मृत्यु भएको घटनामा खानेपानी मन्त्री बीना मगरले प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ..
आहा रारा गोल्ड कपमा २ विदेशी सहित १० टिम सहभागी हुने
पोखरा ४ फागुन । नेपालको प्रतिष्ठित आहा रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता २०७५ मा १० टिम सहभागि हुने भएका छन् । यही.....
कास्कीमा ६ महिनामा करिब एक चौथाई पूँजीगत खर्च
नेपाल डेरी एसोसिएसन को २०औ स्थापना दिवस सम्पन्न
तनहुँमा शैक्षिक सामाग्री बितरण
रेडियो अर्पणको अध्यक्षमा पौडेल निर्वाचित
Editor: Tek Raj Pokharel
Excutive Editor: Prakash Sigdel/HiraLal Gurung
OM RISING MEDIA NETWORKHead Office : Ratananagar-9, Sisahe Baltandi Chitwan Corporate Office : Bharatpur-10, Chitwan